दलाल व्यवस्था र अन्धभक्त नेताविरुद्ध हाइड्रोजन बम बोक्ने निर्णय गरेँ — OnlineDabali
Posted on March 17, 2018 by अनलाइन डबली
काभ्रेको कोसिपारी बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएर निर्घात कुटपिट गरेर हत्या गरिएकी काभ्रे सानो गौथली–७ की ३३ वर्षीया लक्ष्मी नेपालीका छोरा सुमन नेपालीको भिडियोको बयान र कैलालीमा राधा चौधरीलाई बोक्सी भन्दै ६ घण्टासम्म लगातार दिएको यातनाको भिडियोले मन कट्कै काट्यो । मधेसमा ८ वर्षीय बालिकालाई सामुहिक बलात्कार, कंचनपुरमा विवाह गर्न नमानेपछि युवतीको मुख नै जलाएको घटना मेरो मनस्तिस्कमा विचरण गरिरहेका छन् । धिक्कार छ मेरो समाज, मानिसको चेतना । मनले आफैलाई प्रश्न गर्छ, थुक्क केही गर्न नसक्ने ?
यो प्रश्नले मलाई भित्रभित्रै पोलिरहेको छ । यसको जवाफ नदिएपछि मलाई सधैंभरी पोल्नेछ । त्यसैले त्यसको उत्तर खोज्न घोत्लिए र जरो नै भेटाएँ । मेरो चेतले यसको सबै दोषी अहिलेको राज्यव्यवस्था नै हो भन्यो । यो व्यवस्थाले रुढीवाद, अन्धविशवास र अपराधको संरक्षण गरेको छ । संविधान र नेताको भाषणमा गणतन्त्रमा आएपनि जनताको जीवनमा पुरानै युग छ । गतल कुराको पक्षपोषण गर्ने राज्य व्यस्थाले समाजलाई दिने भनेकै यही हो । त्यसैका उत्पादन हुन् समाचारमा अाइरहेका घटनाहरु । राज्य संचालक नै रुढीवादबाट ग्रस्त छन्, उनीहरु लामा कपाल पालेका र पहेँलोबस्त्र लगाएका व्यक्तिहरुको ….ढोग्दै आर्शिवाद लिन्छन् । चुनावमा जनताले भोट हालेर जिताउने तर ढुंगा, भैसी, पहेँलो बस्त्रधारीको पुजा गर्ने चलन छ । अन्धविश्वास नै अपराधको मुख्य स्रोत हो । यसको कुनै रुप हुँदैन ।
अन्धविश्वासलाई संसदीय व्यवस्थाले संस्थागत गरेको छ । यो पनि पुस्तान्त्रण भइरहेको छ । यसको अन्त्य नगरी समाज शुद्ध हुँदैन । त्यसको लागि राज्य संचालकहरुको मनैबाट रुढीवाद, अन्धविश्वास हट्नुपर्छ र वैज्ञानिक र भौतिक कुरामा विश्वास हुनुपर्छ । त्यही अनुसारको राज्यका संयन्त्रमा चेतनाको विकास गराउनुपर्छ । पहिला राज्य संचालक र राज्यका उपरी संरचनालाई वैज्ञानिक विचारबाट लैस गराउनुपर्छ । त्यसपछि आम नागरिकलाई के ठिक हो के बेठिक हो भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ । यहाँ त कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरु नै बोक्सी, दाईजो नल्याएको भन्दै श्रीमती जिउँदै जलाउनेदेखि बलात्कारी र चोरलाई काखी च्यापेर बसेका छन् । रमिते भएका छन् । यसको उदाहरण दिनै पर्दैन ।
त्यसैगरी संसदीय व्यवस्थाले दलालीकरण, भ्रष्टीकरणलाई संस्थागत गरेको छ । यो पनि पुस्तान्त्रण हुँदै आएको छ । नागरिक सुन्दर जीवनको लागि संसदीय व्यवस्थामा फेल भइसकेको छ । व्यवस्था नै दलाली र भ्रष्टीकरण छ, त्यसका संचालकहरु दलाल-भ्रष्ट, अन्धविश्वासी र रुढीवादी छन् । अनि कसरी समाज उभो लाग्छ ? सम्भव छैन ।
मेरो चेतले देखेको यही हो । यसविरुद्ध हाइड्रोजन बम बोक्ने निर्णय गरेको छु । लक्ष्मी नेपाली र सुन्तली तामाङ, राधा चौधरीहरुका घाउमा पट्टी लगाउन विचारको हाइड्रोजन बम आवश्यक छ । जसले रुढीवादी, अन्धविश्वासी, दलाल, भ्रष्टाचारी, बलात्कारीलगायत गलत सोँच र चिन्तनलाई ध्वस्त पार्नेछ । त्यसपछि आधारभूत आवश्यकता पूरा भएका आदर्श नेता र समृद्ध देश र जनता हुनेछन् । नेपाल एउटा सुन्दर संचार हुनेछ । तपाईँ पनि अाउनुहोस् यस अभियानमा सहभागी होऔं ।